विकास देखेर आत्तिएका विपक्षीहरु सरकार ढलाउन लागे-केपी ओली ! | सुदुरपश्चिम खबर
विकास देखेर आत्तिएका विपक्षीहरु सरकार ढलाउन लागे-केपी ओली !
बुटवलमा नेकपा ओली समूहको जनसभा
बुटवलः नेकपाका अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सरकारले मुलुकमा विकास गरिरहेको काम देखेर विपक्षीहरु सरकार ढलाउन लागिपरेको आरोप लगाएका छन् ।
पहिलो दुई वर्षमै भएको काम देखेर आत्तिएकाहरुले देशी–विदेशी शक्तिको आडमा सरकार र आफू विरुद्ध मोर्चाबन्दी गरेको ओलीले बताए । ‘सरकारले मुलुक निर्माणको काममा फड्को मा¥यो । यसलाई आफ्नै पार्टीभित्रका कतिपयले देख्न सकेनन्, ओलीले भने,–‘पाँच वर्षसम्म ओलीले काम गर्न पायो भने त आगामी निर्वाचनमा आफ्नो बाकसै खाली हुन्छ भन्ने डरले देशी विदेशी शक्ति मेरा विरुद्ध लागे ।’
लिपुलेक, लिम्पियाधुरासहितको नक्सा सार्वजनिक गरेपछि सरकार र आफू विरुद्ध षड्यन्त्र सुरु भएको उनको भनाइ थियो । नेकपा लुम्बिनी प्रदेशको आयोजनामा बुटवलमा भएको जनसभालाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले आफूहरुको एजेण्डा विकास र समृद्धि मात्रै रहेको बताए ।
‘मेरो नेतृत्वमा सरकार गठन भएको तीन वर्ष पुरा भएको छ । यो बीचमा धेरै काम भएका छन, मैले असोज ३ गते कामको विवरण टेलिभिजनबाट भन्नेछु, सबैले हेर्नुहोला,’ ओलीले आग्रह गरे ।
यो सरकार गठन भएपछि भएका महत्वपूर्ण काम आफ्नै पार्टीका कतिपय नदेखी विरोधमा उत्रिने गरेको बताए । ‘उहाँहरु (प्रचण्ड–नेपाल)ले कहिल्यै विकास देख्नु भएन, अरु टेलिभिजनबाट सरकारलाई गाली गर्नुभयो,’ उनले भने,–‘अहिले सडकबाट गाली पुराण नै चलिरहेको छ । माघ २८ गते काठमाण्डौंमा गाली पुराणको १७ औंसम्म आयो ।’
नेकपा फुटेको नभइ पार्टीको आचरणलाई धमिल्याउने तत्वहरु निस्किएको उनले बताए । यसले सिंगो पार्टीलाई कुनै असर नपर्ने भन्दै ओलीले उनीहरु बाहिरिएपछि पार्टी रफ्तारमा अघि बढेको बताए । ‘उनीहरु रहदासम्म संवैधानिक आयोगहरु पनि रिक्त भए, अहिले नियुक्ति भएको छ । पार्टी पनि चलायमान भएको छ,’ उनले भने । कायकर्ताको साथ आफूहरुसँगै भएको भन्दै उनले प्रचण्डलाई बुटवलको सभा हेर्न आउन आग्रह समेत गरे ।
अध्यक्ष ओलीले परिवार केन्द्रीत कल्याणमा लागेकाहरुसँग कुनै प्रतिष्पर्धा नभएको भन्दै आफूहरु विकास, समृद्धिको पक्षमा रहेको जिकिर गरे । उनीहरुको मिसन कुनै हालतमा केपी ओलीलाई सरकार र पार्टीबाट हटाउने रहेको पनि उनले बताए ।
प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिष्पर्धा गर्न चाहनेहरुलाई आगामी चुनावको मतगणनामा आउन आग्रह गरे । आफ्नो नेतृत्वको पार्टीले ५० लाख लोकप्रिय मत र बहुमत प्रत्यक्ष निर्वाचित सिट ल्याउने दावी उनले गरे । मुलुकलाई अस्थिरताबाट बचाउन आफूले संविधान अनुरुप नै संसद विघटन गरेको पनि ओलीले दावी गरे ।
(लक्ष्मण पोखरेलले अन्नपुर्ण पोष्टमा लेखेका छन्।)
तामाको भाडाको पानी पिउँदा स्वास्थ्यलाई हुने फाइदाहरू !